Iinkonzo zokuhlola - iXuzhou Roc International Trading Co., Ltd.
Kutheni uhlolo lweROCPLEX lungcono
Sineqela lokuhlola umgangatho wobuchule kwizinto zebhodi yeenkuni.
Amava okuvelisa kunye nokuhlola ama-25 kwiplywood, i-MDF, i-OSB, ibhodi ye-melamine, iimveliso ze-LVL.
I-100% ilungile, inobungcali kwaye ingqongqo.
100% abahloli bobungcali.
Ukugquma iindawo zeshishini zase China.
Sinikezela ngeenkonzo ezilungileyo.
Ukukhupha ingxelo yokuhlola kwisithuba seeyure ezili-12 emva kovavanyo.
Ilabhoratri yeBhodi yeenkuni
Inkqubo yeenkonzo (ngamanyathelo amathathu nje, uvavanyo lwenziwe）
Sichaphazele ngendawo kunye neemveliso zokukhuthaza.
Siza kuthumela abahloli abaziingcali kwindawo yokuhlola.
Uya kufumana ingxelo yokuhlolwa kwisithuba seeyure ezili-12.
Ukuhlolwa kwangaphambi kokuthunyelwa (PSI)
Ukuhlolwa kwangaphambili kokuthunyelwa kuyenziwa xa imveliso igqityiwe nge-100% kwaye i-80% ipakishwe. Senza uhlolo lwesampulu ngokungqinelanayo ngokweemfuno zabathengi.
Kwingxelo ngaphambi kokuthunyelwa, siya kubonisa ngokupheleleyo ubungakanani bezinto, izinto zokupakisha kunye nokuba umgangatho wemveliso uyahlangabezana kusini na nemigangatho.
Ukuthintela nawuphi na umngcipheko kwi-odolo yakho, qiniseka ukuba iimveliso ozithengayo ziyahlangabezana neemfuno zakho kunye neemfuno zesivumelwano ngaphambi kokuba uhlawule imveliso.
Umxholo wokuhlola ubandakanya isitayile semveliso, ubungakanani, umbala, ubugcisa, ukubonakala, ukusebenza, ukhuseleko, ukuthembeka, indlela yokupakisha, iilebheli ezifanelekileyo, iimeko zokugcina, ukhuseleko lwezothutho kunye nezinye iimfuno ezichazwe ngumthengi.
Ngexesha loVavanyo lweMveliso (DPI)
Xa imveliso igqityiwe ngama-50%, sijonga kwaye sivavanye umgangatho weemveliso ezigqityiweyo kunye nezigqityiweyo ngokweenkcukacha zemveliso yakho kwaye sikhuphe ingxelo yokuhlola.
Ngexesha lokuhlolwa kwemveliso kunokukunceda uqinisekise ukuba umgangatho, umsebenzi, inkangeleko kunye nezinye iimfuno zemveliso ziyahambelana nenkcazo yakho kuyo yonke inkqubo yokuvelisa, kwaye kuyanceda ekufumaneni kwangoko nakuphi na ukungathobeli, ngaloo ndlela kunciphisa ukulibaziseka kumzi-mveliso. umngcipheko wokuhambisa.
Umxholo wokuhlola ubandakanya uvavanyo lwelayini yemveliso kunye nenkqubela phambili yokuqinisekisa, ukuvumela iimveliso ezinesiphene ukuba ziphuculwe ngexesha elifanelekileyo, kuvavanywa ixesha lokuhanjiswa, kuvavanywa iimveliso ezigqityiweyo kwinkqubo nganye yemveliso, kwaye kujongwa isimbo, ubungakanani, umbala, inkqubo, inkangeleko, ukusebenza, ukhuseleko, ukuthembeka, indlela yokupakisha, iileyibhile ezinxulumene noko, iimeko zokugcina, ukhuseleko lwezothutho kunye nezinye iimfuno ezichazwe ngumthengi kwiimveliso ezigqityiweyo.
Uvavanyo lokuQala lokuQala (IPI)
Xa iimpahla zakho zigqityiwe ngama-20%, abahloli bethu baya kuza kumzi-mveliso ukwenza olu hlolo lulandelayo lweemveliso.
Olu hlolo lunokuphepha iingxaki zebatch kunye neziphene ezinkulu kuyo yonke iodolo. Ukuba kukho ingxaki, unayo ixesha lokuyiphucula ukuqinisekisa ukuhanjiswa kwexesha kunye nomgangatho wemveliso.
Umxholo wokuhlola ubandakanya ukuqinisekisa isicwangciso semveliso, ukujonga isitayile semveliso egqityiweyo, ubungakanani, umbala, inkqubo, inkangeleko, ukusebenza, ukhuseleko, ukuthembeka, indlela yokupakisha, iilebheli ezifanelekileyo, iimeko zokugcina, ukhuseleko lwezothutho, kunye nezinye iimfuno ezichazwe ngumthengi.
Uvavanyo olupheleleyo kunye noVavanyo loVavanyo
Lonke uhlolo lunokwenziwa ngaphambi okanye emva kokupakisha ngokweemfuno zabathengi. Ngokweemfuno zabathengi, kwiziko lokuhlola lenkampani yethu okanye kwindawo echongwe ngumthengi, siya kuhlola inkangeleko, umsebenzi kunye nokhuseleko lwemveliso nganye; umahluko phakathi kweemveliso ezilungileyo kwiimveliso ezimbi ngokungqinelana neemfuno zabathengi ezisemgangathweni.
Kwaye uxele iziphumo zokuhlola kubathengi ngexesha elifanelekileyo. Emva kokuba uvavanyo lugqityiwe, iimveliso ezilungileyo zipakishwe kwiibhokisi kwaye zitywinwe ngamatywina akhethekileyo. Iimveliso ezineziphene zihlelwa kwaye zibuyiselwe kumzi-mveliso.
I-ROC iqinisekisa ukuba yonke imveliso ethunyelweyo iya kuhlangabezana neemfuno zakho zomgangatho: Siya kubonelela ngedatha yempendulo kubandakanya:
Zonke iingxelo zokuhlola, imifanekiso ehambelana nayo, iimeko ezingaqhelekanga, oonobangela, amanyathelo, kunye neendlela zokwenza imveliso yokuhlolwa kweROC kugxile ekuhlolweni kwemakethi yaseJapan. Ukuphunyezwa okungqongqo kwenkqubo yolawulo yaseJapan, kunye nabasebenzi abahlola ubuchule kunye neendawo zokuhlola ezilawulwa ngokungqongqo, banokukunika iinkonzo zokuhlola ngokupheleleyo kwiziko lokuhlola.
UkuJongwa kweMveliso (PM)
Abahloli bathunyelwa kumzi-mveliso kwasekuqaleni kwemveliso ukulandelela kunye nokuqinisekisa yonke inkqubo yemveliso, umgangatho kunye nenkqubela phambili kwimveliso.
Hlaziya kwaye ufumanise izizathu zemveliso esemgangathweni engaqhelekanga, yenza amanyathelo okuchasana nezizathu, qinisekisa ukuphunyezwa komzi-mveliso, kwaye unike ingxelo ngazo zonke iimeko zentsimi kwi-ustomers ngexesha elifanelekileyo.
Ukukhubazeka kwemveliso kunye nenkqubela phambili yemveliso zifunyenwe ngexesha ngexesha lenkqubo yokuvelisa, kwaye kwenziwa izicwangciso zokulungisa kwangexesha ukuqinisekisa ukuba iimveliso zakho zinokuveliswa kakuhle kuyo yonke inkqubo yokuvelisa.
Umxholo wokuhlola ubandakanya ulawulo lwenkqubela phambili yemveliso, ukuphathwa kweendawo ezimbi kunye nolawulo ngexesha lokuvelisa, iimfuno zokuphucula umzi-mveliso, ukuqinisekiswa kokuphunyezwa kophuculo, ukuqinisekiswa kweziphumo zokuphunyezwa, ingxelo kwangexesha malunga neemeko zemveliso kunye neemeko ezingaqhelekanga.
Uphicotho lweFektri (FA)
Ngokweemfuno zophicotho-zincwadi, abaphicothi-zincwadi be-ROC baya kuphicotha ukuthembeka kweshishini labavelisi, amandla emveliso, inkqubo yolawulo lomgangatho, uphicotho-ncwadi ngoxanduva kwezentlalo, kunye nokulungelelaniswa kwenkampani neemeko zemveliso.
Siphicotha iifektri zethu ukuze ukhethe umthengisi ofanelekileyo.
Uvavanyo lubandakanya ilayisensi yeshishini lasefektri, ukuqinisekiswa kwemizi-mveliso kunye nokuqinisekiswa kwesazisi, ulwazi loqhakamshelwano lwasefektri kunye nendawo, ubume benkampani kunye nesikali, amaxwebhu kunye nolawulo lwenkqubo, uqeqesho lwangaphakathi, izinto zokwenza imveliso kunye nolawulo lwabanikezeli, uvavanyo lwangaphakathi lwelebhu kunye novavanyo, kunye nokuphuculwa kwesampulu, izibonelelo zefektri kunye neemeko zezixhobo, amandla emveliso yefektri, iimeko zokucwangciswa kunye nokupakishwa, ukulinganiswa kwezixhobo kunye nokugcinwa kweerekhodi, ukuvavanywa kwesinyithi, iinkqubo zolawulo lomgangatho, uxanduva kwezentlalo, nceda ujonge uluhlu lophicotho-zincwadi lweROC ngeenkcukacha.
Ukulawulwa kokuKhongozelwa kweKhonteyina (CLS)
Iinkonzo zokongamela zibandakanya ukuvavanya imeko yesikhongozeli, ukujonga ulwazi ngemveliso, ukujonga inani leemveliso ezilayishwe kwisikhongozeli, ukujonga ulwazi lokupakisha, kunye nokujonga yonke inkqubo yokulayisha isikhongozeli, ngokungakhethiyo ukhetha ibhokisi yeemveliso ukujonga inkangeleko kunye nokusebenza.
Ukuthintela umngcipheko omkhulu wokulayisha imveliso engalunganga okanye eyonakeleyo, okanye ubuninzi obugwenxa, njl. Njl. Abahloli babek 'esweni indawo yokulayisha ukuqinisekisa ukuba iimveliso zakho zipakishwe ngokukhuselekileyo.
Umxholo wokuhlola ubandakanya ukurekhoda imeko yemozulu, ixesha lokufika kwesikhongozeli, inombolo yesikhongozeli kunye nenombolo yetreyila; ingaba isikhongozeli sonakele, simanzi okanye sinevumba elikhethekileyo, ubungakanani kunye nemeko yokupakisha engaphandle; ujonge ibhokisi yeemveliso ngokungakhethiyo ukuqinisekisa ukuba ziimveliso eziyimfuneko ukuba zilayishwe kwizikhongozeli; ukubeka iliso kwinkqubo yokulayisha isikhongozeli ukuqinisekisa umonakalo omncinci kunye nokwenza nkulu ukusetyenziswa kwendawo; Ukutywina izikhongozeli ezinamatywina esiko; ukurekhoda amatywina, kunye nexesha lokuhamba kwesikhongozeli.
Ukunyanzeliswa kwebhodi yeenkuni, kuba singumvelisi
Singumxhasi onamandla kulawulo lomgangatho ngaphambi kokufumana iimpahla zakho e-China.
Ngexesha lokuvelisa, izinto ezininzi kunye neenkcukacha zinokungahambi kakuhle.
Ukufumana iarhente yolawulo lomgangatho ofanelekileyo ayimfuneko.
I-ROC yobungcali kwibhodi yeenkuni izixhobo zokuphembelela ezivela kwi-ROC iminyaka engama-25 yamava ebhodi yeenkuni.
Ukuhlolwa kweMigangatho ye-ROC akunakunceda kuphela ekuqinisekiseni nasekuphuculeni umgangatho wemveliso, kodwa kukomeleza ishishini lakho kunye nentengiso, kwaye kukuncede wakhe igama elihle njengoko siqinisekisa ukuba abathengi bakho
Ukunciphisa umngcipheko kumgangatho wemveliso ukuya kwezantsi
Qinisekisa umgangatho wakho wemveliso kwaye unikezele ngamanyathelo okuphucula ngaxeshanye
Kukunceda ukuba uqinisekise ngezinga lokuphumelela
◎ Ngexesha elifanelekileyo
Qinisekisa ixesha lokuhanjiswa
Ukunciphisa umngcipheko kwishishini lakho
Kukunceda ukhethe oyena mthengisi ubalaseleyo
Thintela imiba enokubakho kwimigangatho enokwenzeka
Qinisekisa ukuba iimveliso zakho zilayishwe kwizikhongozeli ngendlela echanekileyo nakunani elifanelekileyo
Uluhlu lweeNkonzo zoVavanyo lweeMveliso
Ezinye izinto ezenziwe ngomthi